न्याय मागिरहेछ नन्दप्रसाद अधिकारीको आत्मा – Kanak Mani Dixit
हिमाल खबरपत्रिका (९-१५ चैत, २०७६) बाट
शिक्षक मासिकको सह–प्रकाशन नीति–विमर्श को चैत २०७६ अड्ढको आवरणमा मन दुख्ने तस्वीर छापियो । एउटा ‘बडी ब्याग’ छ, जसभित्र छ पाँच वर्षअघि आमरण अनशनबीच ज्यान गुमाएका नन्दप्रसाद अधिकारीको शव । टाँसिएको स्टिकरमा लेखिएको छ: ‘२०७१/६/६ गते, जिल्ला गोरखा, फुजेल गाउँ ७ बस्ने नन्दप्रसाद अधिकारी’ ।
नन्दप्रसाद अधिकारी अस्पतालको बेडमा . तस्वीर: कनकमणि दीक्षित
नन्दप्रसाद अधिकारीको शव बाकस नं. ४ मा । तस्वीर: कनकमणि दीक्षित
नन्दप्रसादको निधनपछि शव एम्बुलेन्समा हुइँक्याइहाले । पछ्याउँदै सुबोध प्याकुरेल र म शिक्षण अस्पताल पुग्यौं । दुई चारवटा चिसो बाकस खोल्दै हेर्दा ‘बक्स नं. ४’ मा उनको शव भेट्यौं । दुई वर्ष जतिपछि अस्पतालले बक्सबाट झिकेर सामूहिक शव कक्षमा उनको लासको स्थानान्तरण गर्‌याे ।
सन् १९८१ मा उत्तरी आयरल्याण्डकी राजनीतिक जुझारू २७ वर्षे बबी स्याण्डस्को कारागारमै आमरण अनशनका क्रममा मृत्यु भयो । स्याण्डस्को जति विश्वव्यापी चर्चा भयो, नन्दप्रसादको त्यत्ति नै हुनुपर्ने हो । तर देशबाहिर त के देशभित्रै पनि नन्दप्रसादको जीवन–त्यागको मूल्य बुझिएन, कदर त परै जाओस् ।